China 55 HRC Square End mill-2 Flute mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Ny fikosoham-baran'ny karbona tungsten dia iray amin'ireo karazana fitaovana fikosoham-bary izay matetika ampiasaina. Ny fikosoham-baran'ny karbônina tungsten dia miavaka amin'ny karazany hafa satria manana nify manapaka amin'ny tendrony iray ary koa amin'ny sisiny. Ny milina famaranana karbônina tungsten koa dia manana "sodina" iray na maromaro, midika hoe lalan-driakan'ny helika lalina izay mihazakazaka midina ilay mikapa.
Mampiasa akora 100% tany am-boalohany izahay, ny vovoka microbst tungsten karbida ary vovoka kobalt (avy amin'ny teny alemanina) hanaovana ny tsorakazo karbida, ny hakitroka dia mety ho 92.5-94.0 (HRA), ary ny TRS dia 4200-4800 (N / mm2), ity kiborida karbida dia afaka miantoka ny fikosoham-bary farany miaraka amin'ny fanoherana mahery vaika sy ny tanjaka misy fiantraikany.
Fitaovana mikraoba voajanahary tsy misy fangarony, hamafin'ny hafanana ary TRS
Grain haben'ny: 0.2-0.6μm,
Hamafin'ny: 92.5-94.0 HRA,
Density: 14.3-14.8 G / cm3
2, nahazo 250T Extruder, 10MPa Overpressure Sintering oven-Vacuum isika
Dewaxing, ireo fitaovana roa ireo dia tena zava-dehibe amin'ny famokarana sy ny baoritra karbida avo lenta.
3, Mampiasa ny tehinay karbida ho an'ny 90% amin'ny fitaovana fanapahana izahay.
4, nanolotra milina fitotoana mandroso CNC amin'ny fikirakirana izahay, Rollomatic, Schneeberger avy any Suisse, ANCA avy any Aostralia, Zoller avy amin'ny Alemanina, KEYence avy any Japon, nanangana (Japan FANUC, foibe fanodinana rahalahy) fanadinana laboratoara fitaovana. Teknolojia avy any Taiwan. Manome toky avo lenta sy fampisehoana tsara.
Miaraka amin'ny fanahin'ny "crédit aloha, ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fanavaozana, ny fiaraha-miasa tso-po ary ny fitomboan'ny fiaraha-mientana", ny orinasanay dia miezaka ny mamorona ho avy mamirapiratra miaraka aminao, mba ho lasa sehatra sarobidy indrindra amin'ny fanondranana ny vokatra any Chine!
Teo aloha: 55 HRC NC Spotting Drills ho an'ny alimo
Manaraka: HRC55 lava halavan'ny famaranana toradroa